MUQDISHO, Soomaaliya - Wasaaradda amniga ee Xukuumadda Federaalka ayaa soo saartey War Saxaafadeed ay uga hadashay lacag la sheegay in laga keenay dalka Imaaraadka, oo maanta lagu qabtey Garoonka Diyaaradaha Muqdisho.
Maanta barqadii abbaaro 11:40am waxaa Garoonka Aadan Cabdulle ee magaalada Muqdisho soo caga dhigatay diyaarad nooceedu yahay Boeing 737.
Diyaaraddan waxyaabaha ay sidday waxaa kamid ahaa 3 boorso aan calaamadeysnayn.
Hawl wadeennada garoonka ayaa sida caadada ahaydba waxa ay marsiiyeen baaritaan.
Shaqalaha garoonka oo ka shakiyay borsooyinka ayaa waxa ay xiriir la sameeyeen qeybta la dagaallanka argagixisada ee Hay’adda Nabad Sugidda iyo Sirdoonka Qaranka.
Waxaa la ogaaday in boorsooyinkan laga soo buuxiyay lacag Doollar ah, waxa ayna haatan ku jiraan gacanta dowladda si baaritaan dhameystiran loogu sameeyo.
Lacagta la qabtay waxa ay dhantahay 9.6 milyan (Sagaal milyan iyo lix boqol oo kun oo Doollarka Mareykanka ah).
Hay’adaha Amniga waxa ay haatan ku hawlanyihiin baaritaan ku saabsan halka ay lacagtu ka timid, meesha ay u socotay, dadkii ku lug lahaa iyo dantii laga lahaa in lacag intan la’eg lasoo geliyo dalka.
Wasaraadda Amniga Gudaha waxa ahy caddeynaysaa in aysan jirin wax xadgudub ah oo ka dhacay garoonka intii lagu guda jiray baaritaanka iyo lasoo wareegidda boorsooyinka.
Waxaa jira waddamo aan xiriir la leenahay oo taakuleeya Dowladda iyo laamaheeda kala duwan, balse taakuleynta dhaqaale waxaa Dowladda loo soo marsiiyaa habraac waafaqsan shuruucda dalka iyo kuwa caalamiga ah ee la xiriira isu-gudbinta lacagaha.
Arintan ayaa kusoo beegmaysa xilli xiriirka diblomaasiyaded ee Somaaliya iyo Imaaradka Carabta uu hoos u dhacay wixii ka dambeyay markii Xukuumadda Khayre ay go'aanka dhex-dhexaadka ka qaadatey Khilaafka Khaliijka.
Dowladda Imaaraadka ayaa sanadihii ugu dambeeyay ka taageeraysay dowladda Federaalka, iyo qaar kamid ah maamul goboleedyada, sida Puntland iyo Jubbaland dhinaca tababarka Ciidamada iyo bixinta Mushaaraadkooda.
Maxay salka ku haysaa magacaabista Cabdi Maxamed Sabriye?
Soomaliya 04.01.2018. 16:31
Ra'iisul Wasaare Khayre ayaa xilka Wasiirka Arriamaha Gudaha u magacaabay shaqsi dhaqaalo ku bixiayay....
Maamullada oo loo ogolaaday inay bixiyaan Rukhsadaha Kalluumeysiga
War Saxaafaded 11.02.2018. 11:35